Wave Pay 3% Cashback FAQs
၁။ Promotion ကာလ?
Promotion ကာလသည် September 20 ရက်နေ့မှစပြီးရက်ပေါင်း၉၀အထိဖြစ်ပါသည်။
၂။အခြားငွေပေးချေမှုများသည်လည်း Promotion တွင်အကျုံးဝင်ပါသလား?
အခြားငွေပေးချေမှုများသည်တွင်အကျုံးမဝင်ပါ။ Wave Pay တစ်ခုတည်းသာအကျုံးဝင်ပါသည်။
၃။အခြားဖုန်းနံပါတ်သို့ငွေဖြည့်ပေးပါက Cash-Back Promotion ရနိုင်ပါသလား?
မိမိ၏ဖုန်းကိုဖြစ်စေ၊အခြားဖုန်းကိုဖြစ်စေ Wave Pay ငွေပေးချေမှုဖြင့် Promotion ရနိုင်ပါသည်။
၄။Wave system push notification မရပါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမလဲ?
Wave Pay App တွင် Login ဝင်ပြီး Inbox ထဲတွင်စစ်ဆေးပါ။
၅။Cash-Back promotion လက်ခံရရှိမှုရှိမရှိကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမလဲ?
Wave Pay လက်ကျန်ငွေအားစစ်ဆေးခြင့်ဖြင့်သိရှိနိုင်ပါသည်။
၆။Telenor Website တွင် Computer ကိုအသုံးပြုပြီး Top Up လုပ်ဆောင်ပါက Wave System Push Notification ကိုမည်သို့ရရှိမလဲ?
Wave system push notification အားသင်၏ Wave Pay App သွင်းထားသောဖုန်းထဲသို့ပို့ဆောင် ပေးမည်ဖြစ်သည်။
၇။ယခု Promotion သည်အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အကျုံးဝင်ပါသလား?
ယခု Promotion သည် Prepaid ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့် Postpaid ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်းများအတွက်သာအကျုံးဝင်ပါသည်။
၁။ Telenor Sim Card တစ်ခုကို ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ။
တယ်လီနော ဆင်းကတ်တစ်ခုကို ၁၅၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါသည်။ (မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို)
၂။ SIM Card များကို ဘယ်မှာ ၀ယ်ယူနိုင်မလဲ။
၃။ Telenor ဆင်းကဒ်တွေဟာ handsets တိုင်းမှာ သုံးလို့ အဆင်ပြေပါသလား။
မည်သည့် GSM Handsets မဆို telenor ဆင်းကဒ်ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ မိမိလိုချင်တဲ့နံပါတ်နဲ့ ဆင်းကဒ်ကိုရဖို့ ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
၁၅၀ဝ သာ ကျသင့်ပါမည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဖုန်းနံပါတ်ကို MyTelenor App တွင်သော်လည်းကောင်း နီးစပ်ရာ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင် များတွင်သော်လည်းကောင်း ရှာဖွေ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅။ အခြား မိုဘိုင်းကွန်ရက်မှ ဖုန်းနံပါတ်များကို ခေါ်ဆိုပါက ဘယ်လောက် ကျသင့်မလဲ။
တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် အခြားဖုန်းများကို ခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှင် ၂၈ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
၆။ အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုလျှင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
တစ်ပတ်စာ data မှ တစ်လစာ data အထိ package အမျိုးမျိုးကို တယ်လီနောတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့် စျေးနှုန်းများသိလိုပါက ဤနေရာကိုနှိပ်၍ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၇။ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် စာတိုပေးပို့မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
၈။ Fair usage policy ဆိုတာ ဘာလဲ။
အချို့သော သုံးစွဲသူအနည်းငယ်က အင်တာနက်သုံးစွဲမှု ပမာဏ များလွန်းခြင်းကြောင့် အခြားသူများ၏ သုံးစွဲမှုအပေါ်သက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ Fair usage policy က သုံးစွဲသူအားလုံးအပေါ် တူညီသော အင်တာနှုန်းရရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။
၉။ သင့် SIM Card ၏ သုံးစွဲနိုင်သော သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ဘယ်အရာ တွေကို သင် သိထားရပါမလဲ။
သင့် SIM Card ကို ငွေတစ်ကြိမ် ဖြည့် သွင်း ပြီး နောက် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ ရက် တိုင်အောင် သင့် အနေ ဖြင့် ထပ်မံငွေဖြည့်သွင်းမှု (next recharge) သုံးစွဲမှု မရှိပါက အဆိုပါ SIM Card ကို ထပ်မံ စောင့်ကြည့် သည့် ကာလ အဖြစ်( အဝင် )ခေါ်ဆိုမှုသာရရှိသော ကာလ ရက် ပေါင်း ၃၀ နှင့် (အဝင်/အထွက်) ခေါ်ဆိုမှု မရရှိ ဘဲ နောက်ထပ် ရက်ပေါင်း ၆၀ တိတိ ကို သတ်မှတ် စောင့် ကြည့် ပြီး သည့် နောက် တွင် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည့် SIM Card အဖြစ်သတ်မှတ် ပါသည်။ ထို့နောက် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီး ဌာန ၏ ညွှန်ကြား ချက်များ နှင့် အညီ အဆိုပါ SIM Card နံပါတ်ကို စျေးကွက်ထဲ သို့ တဖန် ပြန်လည် တင်ပို့ ရောင်းချ ကာ သုံးစွဲသူ အသစ် ထံသို့ ရောက်ရှိသွားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့် အနေ ဖြင့် SIM card/ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခု ကို သင် ၏ အခြား သော လူမှုကွန်ယက် မီဒီယာ အကောင့် များ၊ ဘဏ်အကောင့် များ နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ သုံးစွဲသူ အတည် ပြု သည့် ပြုလုပ်ချက်များ အတွက်မိမိ ဘာသာ မှတ်ပုံ တင် သုံးစွဲမှု များရှိပါက သင် သည် သာ လျှင် သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ် တာ အချက် အလက် များ ၏ မူလ ပိုင်ရှင် ၊ တာဝန်ရှိသူ အနေ ဖြင့် အဆိုပါ နံပါတ်များ ကို အခါ အားလျော် စွာမိမိ လို အပ်ချက် နှင့် အညီ လွတ်လပ်စွာ ပြောင်းလဲ အသုံးပြု ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုရပါမည်။
၁။ SIM Card များကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူနိုင်မလဲ။
၂။ Telenor SIM Card များက ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား (သို့) Telenor မှဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော ဆိုင်များမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
၃။ Sim card ကို အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူနိုင်ပါသလား။
လတ်တလောတွင် တယ်လီနော အရောင်းစင်တာများနှင့် ဆိုင်ခွဲများ၌ ဆင်းကဒ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူမှုကို မကြာမီအတွင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် စီစဉ်နေပါသည်။
၄။ Telenor SIM Card ဝယ်ယူရန် မည်သို့သော အထောက်အထားရှိသည့် အရာများဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသနည်း။
မှတ်ပုံတင် ၊ ကားမောင်းလိုင်စင် ၊ Passport ၊ ကျောင်းသားကဒ် ၊ ထောက်ခံစာများ ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
၅။ ဆင်းကဒ်အား စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် မည်မျှ စောင့်ရပါသလဲ။
ဖောင်ဖြည့်ပြီး ID အထောက်ပြပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆင်းကဒ်၏ လုပ်ဆောင်မှုများ စတင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ ဆင်းကဒ်ထည့်လိုက်ရုံဖြင့် ချက်ချင်းစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
၆။ ဖုန်းထဲကို ငွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ။
ခဲခြစ်ငွေဖြည့်ကဒ် သို့မဟုတ် E load ဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ မည်သည့်အရောင်းဆိုင်တွင်မဆို ဝယ်ယူဖြည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ online မှ ငွေဖြည့်သွင်းခြင်းအတွက်လည်း မကြာခင်မှာ စီစဉ်ပေးပါမည်။
၇။ တယ်လီနောဆင်းကဒ်တွေက ဘယ်လို handset တွေနဲ့ သုံးလို့ရလဲ။
မည်သည့် GSM handset အမျိုးအစားမဆို တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၈။ ဆင်းကဒ်က အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘယ်ကို အကူအညီတောင်းရမလဲ။
တယ်လီနော၏ call center နံပါတ် 09790097900 သို့ မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို ဆက်သွယ်၍ အကူအညီယူနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍လည်းကောင်း အင်တာနက်ရရှိနိုင်သော နေရာဖြစ်ပါက care@telenor.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပို့၍လည်းကောင်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
၉။ ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ။
*124# ကို ခေါ်ဆို၍ မိမိ၏ လက်ကျန်ငွေ ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ *124*1# ကိုခေါ်ဆို၍ အခြားလက်ကျန်ငွေ ပမာဏ (တယ်လီနောမှ အပိုလက်ဆောင်ရရှိသော လက်ကျန်ငွေ) ကို စစ်ဆေးနိင်ပါသည်။
၁၀။ မိုဘိုင်းအင်တာနက် စတင်အသုံးပြုရန် ကုန်ကျငွေ ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ။
တယ်လီနောဆင်းကဒ်တိုင်းတွင် မိုဘိုင်းအင်တာနက် အတွက် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပေးပြီးသား ဖြစ်သောကြောင့် အပို ကုန်ကျစရိတ် ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
၁၁။ APN setting ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။
စတင်အသုံးပြုသူတိုင်းကို တယ်လီနောမှ အင်တာနက် APN setting ပို့ပေးပါသည်။ setting မချိန်တတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းထဲသို့ အင်တာနက် setting အတွက် စာတို ရောက်မလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားပါက လူကြီးမင်းတို့၏ တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ customer care hotline 979 သို့လည်းကောင်း အခြားသော မိုဘိုင်း ဆင်းကဒ်မှတဆင့် +959790097900 သို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ setting ချိန်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ setting menu ကိုသွားပါ။ mobile network or data setting သို့ဝင်ပါ။ ထို menu အောက်တွင် APN ကို ရှာ၍ internet ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ အသုံးပြုသူ၏နာမည် user name နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် password ကို မဖြည့်ဘဲ ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။
၁၂။ USSD ဆိုတာ ဘာလဲ။
USSD သည် တယ်လီနောမှ လူကြီးမင်းတို့ သိလိုသမျှကို မေးရာတွင် အသုံးများဆုံး dial ဖြစ်ပါသည်။
လက်ကျန်ငွေစစ်ဆေးရန် အင်တာနက် package ဝယ်ယူရန် အခြားအထူးအစီအစဉ်များအား စုံစမ်းရန် ဝယ်ယူရန် လူကြီးမင်းတို့ USSD ကို အသုံးပြုပါသည်။ *124# သည် USSD ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေ စစ်ဆေးရာတွင် အသုံးပြုရပါသည်။ *979# သည် သိလိုသော အချက်အလက်များကို မေးမြန်းရာတွင် အသုံးပြုသော USSD ဖြစ်ပါသည်။ USSD သည် * နှင့် စ၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် call button နှိပ်ပြီး အဆုံးသတ်ရပါသည်။
၁။ Customer care ကနေ ဘယ်လိုအကူအညီယူနိုင်မလဲ။
သင်၏ တယ်လီနောဆင်းကဒ်ဖြင့် 979 ကို ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် 09790097900 ကို ခေါ်ဆို၍၎င်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ care@telenor.com.mm သို့ email ပို့၍လည်းကောင်း နီးစပ်ရာ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များ၌လည်းကောင်း သိလိုသည်များကို မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၂။ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင်/ ဖုန်းအခိုးခံရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အခြား တယ်လီနောဆင်းကဒ်ဖြင့် 979 ကို ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် 09790097900 ကို ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ သင်၏ လက်ကျန်ငွေနှင့် သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များအား အလွဲသုံးစားမလုပ်နိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲလက်က ဆင်းကဒ်ကို ပိတ်ထားနိုင်ပြီး အစားထိုးပြန်လည် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင် ရှိရာ စာရင်းများအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။
၃။ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင်/ ဖုန်းအခိုးခံရရင်/ ဖုန်းပျက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နံပါတ်တူတဲ့ ဆင်းကဒ်ပြန်ရနိုင်သလား။
သင်ဟာ စာရင်းသွင်းပြီးသား ပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်လျှင် နံပါတ်တူ ဆင်းကဒ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ တယ်လီနော စတိုးမှာ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင် ရှိရာ စာရင်းများအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။
၄။ ဆင်းကဒ်ခိုးခံရရင်/ပျောက်သွားရင်/ပျက်စီးသွားရင် ဆင်းကဒ်အစားထိုးတဲ့အတွက် ဘယ်လောက် ပေးရမလဲ။
အစားထိုး ဆင်းကတ်အတွက် မည်သည့်အခကြေးငွေမျှ ထပ်မံပေးဆောင်ရန် မလိုပါ။
၁။ Tourist SIM မှ ရရှိနိုင်သည့် အပိုခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်ရန် ဘာတွေ လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါလဲ?
ပထမဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ အပိုခံစားခွင့်များကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂။ SIM Card များကို ဘယ်မှာ ဝယ်ယူနိုင်မလဲ။
Telenor မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Telenor အရောင်းဆိုင်များတွင်လဲ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Telenor မှ ပေးထားသော Form ပုံစံဖြည့်ပြီးမှသာ SIM Card များကို ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် (သို့) ထောက်ခံစာ တစ်ခုခု ယူဆောင်လာရမည်။ Form ပုံစံအသေးစိတ် အချက်အလက်များကို Telenor ဆိုင်များတွင် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၃။ တစ်ခုထက်ပိုပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါလား?
၄။ Package plan သက်တမ်းဘယ်လောက်ခံပါလဲ?
ပထမဆုံး ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအပြီး ၁၄ရက်ထိ ခံပါတယ်။
၅။ Sim Card သက်တမ်း ဘယ်လောက်ခံပါလဲ?
ရက်၃ဝခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရက်၃ဝအတွင်း ငွေဖြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆင်းကတ်မှာ ပုံမှန်သက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Prepaid Sim လား Postpaid Sim လား?
ကြိုတင်ငွေဖြည့်ထားတဲ့ Prepaid Sim ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ အခြားသောပရိုမိုးရှင်းပလန်တွေကို ရယူနိုင်ပါလား?
ရပါတယ်။ ကြိုတင်ဖြည့်ထားပေးသော ငွေဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကြိုသုံးမှ ရရှိသော ငွေဖြင့် ဝယ်ယူမရနိုင်ပါ။
၈။ Sim Card ဖိုးသပ်သပ်ပေးဖို့လိုပါလား?
Tourist Sim Pack ၁၅ဝဝဝကျပ်တွင် sim card ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ပျောက်သွားခဲ့ရင် အစားထိုးပြန်လျှောက်လို့ရပါလား?
၁၀။ အစားထိုးပြန်လည်လျှောက်ထားရင် မူလလက်ကျန်ငွေပြန်လည်ရရှိမှာပါလား?
၁၁။ သက်တမ်းကုန်ခါနီးလျှင် ဘယ်လိုသိရမလဲ?
သက်တမ်းမကုန်ခင် ၁ရက်အလိုတွင် မက်ဆေ့ပို့ပြီး အကြောင်းကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၂။ အခြား အင်တာနက် အစီအစဉ်များကို ရယူနိုင်ပါလား?
ရယူနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပြီးသော ၅GB ကို အရင်အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၃။ နံပါတ်တူ Toursit Sim ကို နောက်တစ်ခါ ဝယ်ယူနိုင်ပါလား?
၁၄။ မြန်မာပြည်ကိုနောက်တစ်ခါလာတဲ့အချိန် ဒီ sim ကိုပဲ အသုံးပြုချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
ရက်၃၀ မပြည့်ခင် ငွေဖြည့်လိုက်ပါ။ ငွေဖြည့်သက်တမ်းအရ ဆင်းကတ်ကို ငွေဖြည့်တဲ့နေ့မှ ၃၆၅ရက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ Tourist Sim နဲ့ Roaming အသုံးပြုလို့ရပါသလား?
ရပါတယ်။ ဆင်းကတ်သက်တမ်းရှိသရွေ့နှင့် ငွေရှိနေသရွေ့ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး (အနည်းဆုံး ရှိသင့်သည့် ပမာဏမှာ ၂၀၀၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။)
၁၆။ Tourist SIM နှင့် ဘယ်လို ဖုန်းခေါ်ဆိုရမလဲ
- နိုင်ငံတကာဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုရန် 00 သို့မဟုတ် + သင်္ကေတ၊ နိုင်ငံကုတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်ကို နှိပ်ပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
- ပြည်တွင်းဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုရန် ၀၁ သို့မဟုတ် ၀၉ကို နှိပ်ပြီး ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
၁၇။ ကိုယ့် Tourist Sim ကို အပြင်ကလူက ဘယ်လိုခေါ်ဆိုနိုင်မလဲ?
- အခြားနိုင်ငံများမှ ခေါ်ဆိုလျှင် +9597 ရှည့်တွင်တပ်ပြီးခေါ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
- ပြည်တွင်းမှ ခေါ်ဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ 09 ဖြင့်သာ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
၁၈။ ငွေဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ ?
တယ်လီနောဆိုင်ခွဲများမှ သို့မဟုတ် ခဲခြစ်ကတ်မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
*124# ကိုခေါ်ဆိုပြီး စစ်ဆေးပါ။
၁။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဆင်းကဒ်နံပါတ်ရွေးရင် ဘယ်လောက် ကုန်ကျနိုင်မလဲ။
၂။ မိုဘိုင်းအင်တာနက် စတင်အသုံးပြုရန် ကုန်ကျငွေ ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ။
၃။ တယ်လီနော အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
တယ်လီနောအချင်းချင်း ခေါ်ဆိုမှုအတွက် တစ်မိနစ်လျှင် ၂၈ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
၄။ တယ်လီနောမှ အခြားဖုန်းသို့ ခေါ်ဆိုမှုအတွက် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
တယ်လီနောမှ အခြားဖုန်းသို့ ခေါ်ဆိုမှုအတွက်တစ်မိနစ်လျှင် ၂၈ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
၅။ တယ်လီနောမှာ ဘယ်လို ငွေဖြည့်ကဒ်တွေရှိလဲ။
1000, 3000, 5000 နှင့် 10000 ဖိုးငွေဖြည့်ကဒ်များ ရှိပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဤနေရာကိုနှိပ်၍ ရှာဖွေပါ။
၆။ လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ။
နောက်ဆုံး ငွေဖြည့်သွင်းပြီးချိန်မှ စ၍ ၃၆၅ရက်တိတိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
၇။ ဖုန်းဘေလ်ကို ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ။
၈။ ငွေဖြည့်ပြီးပေမယ့် လက်ကျန်ငွေ မရှိတော့ပါ ပြောနေပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် 979 ကိုခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း တယ်လီနော၏ call center နံပါတ် 09790097900 သို့ မည်သည့်ဖုန်းနှင့်မဆို ဆက်သွယ်၍ အကူအညီယူနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များသို့ သွားရောက်၍လည်းကောင်း အင်တာနက်ရရှိနိုင်သော နေရာဖြစ်ပါက care@telenor.com.mm သို့ အီးမေးလ်ပို့၍လည်းကောင်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
၉။ အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ် တစ်ခုလျှင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ။
၁၀။ package မှရတဲ့ အပိုလက်ဆောင်တွေ သုံးစွဲလို့ကုန်သွားရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။
package ထဲမှ အပိုလက်ဆောင်များနှင့် ဒေတာများ သုံးစွဲ၍ ကုန်သွားပါက သုံးသလောက်ပေး အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၁၁။ ငွေကြိုသွင်းစရာမလိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေကော ရှိလား။
ရှိပါသည်။ ငွေကြိုသွင်းစရာမလိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို သုံးစွဲသူတွေအတွက် ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီတွင်ဖော်ပြသွားပါမည်။
၁၂။ အခြားနိုင်ငံတွေကို ဖုန်းခေါ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
မိမိခေါ်ဆိုသည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ကျသင့်ငွေ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိင်ငံချင်းစီ၏ ခေါ်ဆိုမှုကျသင့်ငွေကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၃။ နိုင်ငံတကာသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း စာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ခေါ်ဆိုနိုင်သော နိုင်ငံများအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၁၄။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေချိန်တွင် တယ်လီနော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
သင့် တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် international roaming ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော နိုင်ငံများတွင် အသုံးမပြုနိင်သေးပါ။ သင့်ခရီး မစတင်မီ call center သို့ ခေါ်ဆို၍ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
၁၅။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေချိန်တွင် မိမိဖုန်းသို့ အဝင်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက် ကျသင့်ငွေ ပေးရန် လိုအပ်ပါသလား။
ပေးချေရပါမည်။ ကျသင့်မည့် ပေးချေငွေနှင့် ပတ်သက်၍ ဤနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၁၆။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေချိန်တွင် အိမ်သို့ဖုန်းခေါ်ဆိုရာ၌ မည်မျှ ကျသင့်ပါသလဲ။ တယ်လီနော အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် တယ်လီနောမှ တဆင့် အခြား မိုဘိုင်းကွန်ရက်သို့ ခေါ်ဆိုခြင်း ဘယ်လို ကွာခြားပါသလဲ။
သင်ရောက်ရှိနေသော နိုင်ငံကိုလိုက်၍ ခေါ်ဆိုမှု နှုန်း ကွာခြားနိုင်ပါသည်။ စျေးနှုန်းအသေးစိတ်ကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုပါ။
၁၇။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဒေတာအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ဖြတ်တောက်ခံနေရပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။
သင်ဟာ စမတ်ဖုန်းအသုံး ပြုနေတယ်ဆိုရင် ဖုန်းထဲက app တွေဟာ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေခြင်း update မြှင့်နေခြင်း စတာတွေအတွက် အင်တာနက်ကို ယူဆောင်သုံးစွဲနေပါသည်။ ထို အင်တာနက် အသုံးပြုမှုသည် သင့် အင်တာနက် plan ပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ background data အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်လိုပါက app တစ်ခုချင်းစီအတွက် setting ပြန်ချိန်ညှိခြင်း mobile data ပိတ်ထားခြင်း 500 သို့ internet off ဟု ပေးပို့ခြင်းတို့ဖြင့် ရပ်တန့်နိုင်ပါသည်။ ဖုန်းကို restart ချခြင်းဖြင့်လည်း ပြန်လည် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁၈။ ဖုန်းပျောက်သွားခဲ့ရင်/ ဖုန်းအခိုးခံရရင်/ ဖုန်းပျက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နံပါတ်တူတဲ့ ဆင်းကဒ်ပြန်ရနိုင်သလား။
သင်ဟာ စာရင်းသွင်းပြီးသား ပိုင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်လျှင် နံပါတ်တူ ဆင်းကဒ်ကို ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာ တယ်လီနော စတိုးမှာ ပြန်လည်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ တယ်လီနောအရောင်းဆိုင်ရှိရာ စာရင်းများအား ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ။
၁။ 3G သုံးနိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် 3G ရရှိသော နယ်နိမိတ်ထဲရောက်နေပါတယ်။ ဖုန်းက ဘာလို့ 2G ပဲပြနေတာလဲ။
3G area ထဲတွင် 2G signal ပြနေခြင်းက အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ wireless communication ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် signal လွှွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် 2G သည် ရံဖန်ရံခါ အားအကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦးများအတွင်းတွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကွန်ရက်သည်လည်း 2G နှင့် 3G ကြားတွင် ကျရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ ဖုန်းတွင် 2G signal အတွက်သာ ချိန်ထားပါက 2G signal ပြမည်ဖြစ်ပြီး အကယ်၍ 2G/3G setting ပြောင်းလဲထားပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွနု်ပ်တို့ဘက်မှ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ 4G ဆိုတာဘာလဲ။
4G သည် မိုဘိုင်းကွန်ရက်၏ လေးခုမြောက် မျိုးဆက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန် မြန်ဆန်သော အင်တာနက်အတွေ့အကြုံတို့ကို ခံစားရစေမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ LTE ဆိုတာက ဘာလဲ။
LTE သည် long term evolution ဖြစ်ပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် နည်းပညာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ 4G LTE ဖြင့် မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ပြီး အွန်လိုင်းဂိမ်းများ ဆော့ကစားခြင်း ဗီဒီယို call ခေါ်ဆိုခြင်းများအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
၃။ GPRS,EDGE, 3G နှင့် 4G တို့ ဘယ်လို ကွာခြားလဲ။
GPRS သည် 2G ကွန်ရက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး ပုံမှန် အင်တာနက်နှုန်းကိုသာ သုံးစွဲနိင်ပါသည်။
EDGE သည် 2.5G နည်းပညာဖြစ်ပါသည်။ 2G ထက်အဆင့်ပိုမြင့်ပြီး GPRS ထက် အင်တာနက်နှုန်းပိုမြန်ပါသည်။
3G သည် 2G(GPRSနှင့် EDGE) တို့ထက် ပိုမို မြန်ဆန်ကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
4G သည် LTE platform တွင် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်မှု၏ မျိုးဆက်သစ် နည်းပညာဖြစ်ပြီး အဆင့်အမြင့်ဆုံး နည်းပညာဟုလည်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ 2G 3G တို့ထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော အင်တာနက်ကို ရရှိခံစားစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ တယ်လီနော 4G နဲ့ ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေ ရနိုင်သလဲ။
Video call ခေါ်ဆိုခြင်း HD video များ ကြည့်ရှုထုတ်လွှင့်နိုင်ခြင်း အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
၅။ တယ်လီနော 4G မှာ ဘာတွေကို မျှော်လင့်ထားရမလဲ။
4G သည် 3G ထက် ပို၍မြန်ဆန်ပါသည်။ တပြိုင်နက် သုံးစွဲသူတို့ပေါ်မူတည်၍ အင်တာနက်နှုန်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၆။ 4G အတွက် ဆင်းကဒ်အသစ် သို့မဟုတ် သီးသန့်ဆင်းကဒ်လိုအပ်သလား။
တယ်လီနော USIM လိုအပ်ပါသည်။ သာမန် တယ်လီနော sim ဖြစ်နေပါက နီးစပ်ရာ တယ်လီနော အရောင်းဆိုင်များတွင် USIM ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၇။ USIM ဆိုတာက ဘာလဲ။
USIM သည် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ဆင်းကဒ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများ၏ identity ကို်ယ်ပိုင်အမှတ်အသားကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းပေးထား၍ အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မိုဘိုင်းပေါ်တွင် သီးသန့်ဖြစ်စေသော ဆင်းကဒ်ဖြစ်ပါသည်။ USIM ဖြင့် 4G internet ကို သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၈။ Normal SIM နဲ့ USIM ဘာကွာလဲ။
Normal SIM ကတော့ 2G နဲ့ 3G ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး USIM ကတော့ 2G 3G 4G သုံးခုလုံး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၉။ Data အသုံးပြုမှုနှင့် လက်ကျန်ငွေ ဖြတ်တောက်မှု ဟာ 4G မှာ ပိုများနိုင်သလား။
4G တွင် အင်တာနက်နှုန်းပိုမိုမြန်ဆန်လာသောကြောင့် များများသုံးလေ သုံးသလောက် ဒေတာအတွက် ပိုမိုကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ တယ်လီနော 4G ကို ဘယ်လို activate လုပ်ရမလဲ။
4G area အတွင်းတွင် ဖြစ်ရပါမည်။ သင်၏ handset သည် 2100 MHz frequecy band ရှိရပါမည်။ တယ်လိနော USIM ရှိရပါမည်။ သင်၏ handset နှင့် SIM သည် 4G သုံး၍ ရမရ သိလိုပါက *444# သို့ခေါ်ဆို၍၎င်း 500 သို့ Check4G ဟု ပေးပို့၍၎င်း မေးမြန်းနိင်ပါသည်။
၁၁။ 4G နဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေ ကစားနိုင်ပြီလား။
4G ဖြင့် အွန်လိုင်းဂိမ်းများ ကစားနိုင်ပါသည်။
၁၂။ 4G ဖြင့် voice call များ ပေးပို့ခြင်း လက်ခံခြင်း စာတိုများ ပေးပို့ခြင်း လက်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိင်ပါသလား။
4G ဖြင့် voice call များ ပေးပို့ခြင်း လက်ခံခြင်း စာတိုများ ပေးပို့ခြင်း လက်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိင်ပါသည်။ 4G ဖြင့် voice call ခေါ်ဆိုနေစဉ် 4G မှ 3G သို့ 2G သို့ ကွန်ရက် ကျသွားနိုင်ပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးပါက 4G ကွန်ရက် ပြန်လည်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ 4G နဲ့ video call ခေါ်လို့ ရပါသလား။
4G ဖြင့် video call ခေါ်၍ရပါသည်။
၁၄။ 4G သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
4G area အတွင်းတွင် ဖြစ်ရပါမည်။ သင်၏ handset သည် 2100 MHz frequecy band ရှိရပါမည်။ တယ်လိီနော USIM ရှိရပါမည်။ သင်၏ handset နှင့် SIM သည် 4G သုံး၍ ရမရ သိလိုပါက *444# သို့ခေါ်ဆို၍၎င်း 500 သို့ Check4G ဟု ပေးပို့၍၎င်း မေးမြန်းနိင်ပါသည်။
၁၅။ မိမိ၏ ဆင်းကဒ်သည် 4G သုံး၍ ရမရ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ သုံးလို့မရလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တယ်လီနော 4G ကို အသုံးပြုရန် USIM လိုအပ်ပါသည်။ သင်၏ handset နှင့် SIM သည် 4G သုံး၍ ရမရ သိလိုပါက *444# သို့ခေါ်ဆို၍၎င်း 500 သို့ Check4G ဟု ပေးပို့၍၎င်း မေးမြန်းနိင်ပါသည်။
၁၆။ တယ်လီနော 4G ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနေပြီလား။
တယ်လီနော 4G သည် မြို့ပေါင်း ၁၅မြို့တွင် ရရှိနေပါပြီ။ ပဲခူးတိုင်းတွင် ပြည်မြို့ ပဲခူးမြို့ တောင်ငူမြို့ တနင်္သာရီတိုင်းတွင် မြိတ်မြို့ ထားဝယ်မြို့ မကွေးတိုင်းတွင် တောင်တွင်းကြီးမြို့ အောင်လံမြို့ ပခုက္ကူမြို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် မုံရွာမြို့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စစ်တွေမြို့ နေပြည်တော်တွင် ဒက္ခိဏသီရိ လယ်ဝေး ဥတ္တရသီရိ ပုဗ္ဗသီရိ မြို့တို့တွင် ရရှိနေပါပြီ။
၁၇။ တယ်လီနော 4G ဟာ ဘာလို့ ရန်ကုန်နဲ့ တခြားမြို့တွေမှာ မရသေးတာလဲ။
တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ရန် အခြားမြို့များတွင် စမ်းသပ်လျက်ရှိပါသည်။
၁၈။ 4G internet ကို 3G handset မှာ သုံးလို့ရလား။
မရပါဘူး။ 4G အင်တာနက်ကို အသုံးပြုရန် သင်၏ handset သည် 2100 MHz frequecy band ရှိရပါမည်။ တယ်လိီနော USIM ရှိရပါမည်။
၁။ မိုဘိုင်းအင်တာနက် အသုံးပြုနိင်ရန် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တယ်လီနော ဆင်းကဒ်တိုင်းသည် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေ ရှိရန်မှ လွဲ၍ အခြားလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ 979 အားခေါ်ဆို၍3ကိုနှိပ်ပါ။ 1 ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။ အင်တာနက် setting အားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ အင်တာနက် setting မရရှိခဲ့ပါက APN တွင် internet ဟု ရိုက်နှိပ်ထည့်သွင်းပါ။ အခြားသိလိုသည်များအတွက် 979 သို့ဖုန်းခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၂။ APN setting ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။
စတင်အသုံးပြုသူတိုင်းကို တယ်လီနောမှ အင်တာနက် APN setting ပို့ပေးပါသည်။ setting မချိန်တတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းထဲသို့ အင်တာနက် setting အတွက် စာတို ရောက်မလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားပါက လူကြီးမင်းတို့၏ တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ customer care hotline 979 သို့၎င်း အခြားသော မိုဘိုင်း ဆင်းကဒ်မှတဆင့် +959790097900 သို့ ၎င်း ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ setting ချိန်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ setting menu ကိုသွားပါ။ mobile network or data setting သို့ဝင်ပါ။ ထို menu အောက်တွင် APN ကို ရှာ၍ internet ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။ အသုံးပြုသူ၏နာမည် user name နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ် password ကို မဖြည့်ဘဲ ထားခဲ့နိုင်ပါသည်။
၃။ တယ်လီနောမှာ ဘယ်လို internet နှုန်းတွေရှိသလဲ။
တစ်စက္ကန့်လျှင် 2mb ရှိသော အင်တာနက်နှုန်းကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ ဟန်းဆက်အမျိုးအစား လိုင်းဆွဲအားနှင့် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူဦးရေတို့ပေါ် မှီခို၍ အင်တာနက်မြန်နှုန်း ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
၄။ 1MB ကို ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ။
Smart internet ဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက 1MB ကို ၁၀ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။ သင်အသုံးပြုရန် MB မည်မျှ လိုအပ်သည်ကို ဤနေရာတွင် လေ့လာပါ။
၅။ 1 MB နဲ့ ဘာတွေ သုံးလို့ရမလဲ။
Facebook ရှိ ပုံတစ်ပုံသည် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်နှင့် ကြည့်ရှုရန် 200 to 300 kb ရှိပါသည်။ text email သည် 20 to 30 kb ရှိပါသည်။ youtube တွင် video ကြည့်ရှုပါက သုံးမိနစ်စာ သီချင်းတစ်ပုဒ်သည်3MB မှ4MB အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။
၆။ Default mobile internet plan ဆိုတာ ဘာလဲ။
Default mobile internet plan သည် smart internet ဖြစ်ပါသည်။ သုံးသလောက်ပေး အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး 1MB ကို ၉ ကျပ်ကောက်ခံပါသည်။
၇။ package မှရတဲ့ အပိုလက်ဆောင်တွေ သုံးစွဲလို့ကုန်သွားရင် ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။
package ထဲမှ အပိုလက်ဆောင်များနှင့် ဒေတာများ သုံးစွဲ၍ ကုန်သွားပါက သုံးသလောက်ပေး အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ တူညီသော package အား ဆက်လက်ဝယ်ယူခြင်း အခြား package တစ်ခုအားပြောင်းလဲဝယ်ယူခြင်း တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်နိင်ပါသည်။
၈။ တယ်လီနောက 3G သုံးလို့ ရသလား။
သုံးနိုင်ပါသည်။ 3G သာမက 2G ကိုပါသုံးနိုင်ပြီး စျေးကွက်လိုအပ်ချက်နှင့် ငွေကြေးပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
၉။ တယ်လီနောက 4G သုံးလို့ရသလား။
4G ကွန်ရက်သည် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် LTE အသုံးပြုနိုင်သော မိုဘိုင်းဖုန်းများ လုံလောက်စွာ ရရှိလာပါက 4G service များ ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ 2G နဲ့ video တွေ download ဆွဲနိုင်လား။
ဆွဲနိုင်ပါသည်။ 3G ကွန်ရက်ကဲ့သို့ မြန်နှုန်းမမြင့်နိုင်ပါ။
၁၁။ 2G နဲ့ 3G ဘာတွေ ကွာခြားလဲ။
2G နှင့် 3G သည် voice call,SMS, internet အသုံးပြုခြင်းတို့၌ ကွာခြားခြင်းသိပ်မရှိပါ။ အဓ်ိက ကွာခြားချက်မှာ download speed ဖြစ်ပါသည်။ 3G တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အင်တာနက်နှုန်းဖြင့် video များအား ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ video length ပိုရှည်သော ဇာတ်လမ်းများကိုလည်း download ဆွဲနိုင်ပါသည်။
၁၂။ အင်တာနက်သုံးရန် လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လို စစ်ဆေးရမလဲ။
*124# ကိုခေါ်ဆို၍ စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
၁၃။ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ဒေတာအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲ ဖုန်းလက်ကျန်ငွေ ဖြတ်တောက်ခံနေရပါတယ်။ ဘာလို့လဲ။
၁၄။ အကန့်အသတ်မရှိ မိုဘိုင်းအင်တာနက် သုံး၍ ရနိင်ပါသလား။
အင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် plan များကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်။ အကန့်အသတ်မဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုအတွက် လတ်တလော ဝန်ဆောင်မှု မရရှိနိုင်သေးပါ။
၁၅။ နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေချိန်တွင် တယ်လီနော မိုဘိုင်းအင်တာနက် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
သင့် တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် international roaming ပြုလုပ်၍ အင်တာနက်အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဤနေရာသို့ နှိပ်ပါ။
၁၆။ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ကို activate လုပ်၍ မရပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။
တယ်လီနော ဆင်းကဒ်တိုင်းသည် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်၍ လုံလောက်သော လက်ကျန်ငွေရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ internet setting မချိန်ရသေးပါက 8080 သို့ all ဟုပေးပို့ပါ။ အင်တာနက် setting ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ setting ချိန်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ setting menu ကိုသွားပါ။
mobile network or data setting သို့ဝင်ပါ။ ထို menu အောက်တွင် APN ကို ရှာ၍ internet ဟု ရိုက်ထည့်ပါ။သင်၏ တယ်လီနောဆင်းကဒ်ဖြင့် 979 ကို ခေါ်ဆို၍၎င်း အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် 09790097900 ကို ခေါ်ဆို၍၎င်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။
၁၇။ Customer care နဲ့ ပြောချင်ပါတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲ။
သင်၏ တယ်လီနောဆင်းကဒ်ဖြင့် 979 ကို ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် 09790097900 ကို ခေါ်ဆို၍လည်းကောင်း အကူအညီရယူနိုင်ပါသည်။ care@telenor.com.mm သို့ email ပို့၍လည်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် telenor user မဟုတ်ခဲ့လျှင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုလျှင် +95(0)9790097900 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၁။ တယ်လီနော အချင်းချင်း SMS ပို့ရင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
မည်သည့် ဖုန်းကိုမဆို စာတိုတစ်စောင်ပို့လျှင် ၁၅.၇၅ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။
၂။ တယ်လီနောမှ အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းသို့ စာတိုပို့လျှင် ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
မည်သည့် ဖုန်းကိုမဆို စာတိုတစ်စောင်ပို့လျှင် ၁၅.၇၅ ကျပ်ကျသင့်ပါမည်။ တယ်လီနော နှင့် အခြားမိုဘိုင်းကွန်ရက်အချင်းချင်း ပို့ရာတွင် ပြောင်းလဲမှု မရှိပါ။
၃။ လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ။
၄။ နိုင်ငံခြားသို့ စာတိုပေးပို့နိုင်ပါသလား။
၅။ နိုင်ငံခြားသို့ စာတိုပေးပို့ရာတွင် ဘယ်လောက်ကျနိင်ပါသလဲ။
မည်သည့်နိုင်ငံသို့မဆို စာတိုတစ်စောင်လျှင် ၃၂ ကျပ်ဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၆။ တယ်လီနော ဆင်းကဒ်ဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ စာတိုပေးပို့ခြင်းကို လက်ခံနိုင်ပါသလား။
International roaming ပြုလုပ်ထားပါက နိုင်ငံခြားမှ စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အခမဲ့လက်ခံနိုင်ပါသည်။
၇။ လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လောက် ကြာကြာ သုံးစွဲနိုင်ပါသလဲ။
၁။ တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ဘယ်လို ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရနိုင်ပါသလဲ။
တယ်လီနော သုံးစွဲသူများအတွက် ဖုန်းပြောဆိုခြင်း စာတိုပေးပို့ခြင်း အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အပြင် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ voicemail services, missed call alert, music from My Tune, call forwarding, balance transfer, FREE access to Wikipedia, news updates, horoscopes, lottery results, football updates စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း တယ်လီနောတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ Missed call တွေအတွက် အချက်ပေးနိုင်လား။
Missed call alert ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ဖုန်းပိတ်ထားတဲ့အခါ ဖုန်းမအားတဲ့အခါတွေမှာ ဝင်လာသော call များကို အသိပေးပါသည်။
၃။ Missed call alert အတွက် အပို ပေးဆောင်ရပါသလား။
၄။ Wallpaper ကဲ့သို့ content download များ တယ်လီနောတွင် ရှိပါသလား။
wallpaers, games စသော content download များ တယ်လီနောတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
၅။ My tune ဆိုတာ ဘာလဲ။
My tune သည် သင့်ဖုန်းအား အခြားသူမှ ခေါ်ဆိုရာတွင် ဖုန်းမကိုင်မီ အချိန်အတွင်း၌ သင်နှစ်သက်ရာသီချင်းအား ခေါ်ဆိုသူမှ နားဆင်ခံစားစေနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပါသည်။ My tune တွင် download ထားရှိသော သီချင်းပေါ်မူတည်၍ ကျသင့်ငွေပေးချေရပါသည်။
၆။ My tune ဝန်ဆောင်မှုကို ဘယ်လို ရယူနိုင်သလဲ။
333 သို့ MT ON ဟု sms ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူနိင်ပါသည်။
၇။ My tune အတွက် ကျသင့်ငွေ ဘယ်လို ကောက်ခံပါသလဲ။
My tune ဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၃၁၅ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ တယ်လီနော tune သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး default tune အဖြစ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လျှင် ၃၁၅ ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူပြီး ၃၆၅ရက်တိတိထားရှိနိုင်ပါသည်။
၈။ ဘယ်လို SMS ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တယ်လီနောမှာ ရနိုင်ပါသလဲ။
အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဤနေရာသို့ နှိပ်ပါ။
၉။ SMS ဝန်ဆောင်မှုတွေရဖို့ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Keywords နှင့် short numbers များရရှိရန် ဤနေရာသို့ နှိပ်ပါ။
၁၀။ အခြားတစ်ယောက်ဆီကို လက်ကျန်ငွေ လွှဲပေးလို့ရလား။
လွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ တယ်လီနော သုံးစွဲသူအချင်းချင်း လက်ကျန်ငွေ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်သော လက်ကျန်ငွေပမာဏသည် အကန့်အသတ်ရှိပြီး လွှဲပြောင်းပေးသူသည် လွှဲပြောင်းခ ၅% နှင့် ဝန်ဆောင်ခ ၅% ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။ အနည်းဆုံး၅ဝဝကျပ်မှ စတင်၍ ငွေလွှဲပေးနိုင်ပါသည်။ လက်ခံရရှိသူသည် မည်သည်ကိုမျှ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
၁၁။ နိုင်ငံခြားမှ App များကို download ဆွဲနိင်ပါသလား။
ဆွဲနိုင်ပါသည်။ google play store သို့မဟုတ် အခြား app stores များမှ နေ၍ သင်၏ မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်ပါသည်။ App websites များမှ လည်း တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ အင်တာနက်နှုန်းထားများအတိုင်း ကျသင့်ငွေကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၂။ Viber, WhatsApp တို့ကဲ့သို့ app များမှ activation SMS ရရှိနိုင်ပါသလား။
Viber နှင့် WhatsApp ကဲ့သို့ app များမှ confirmation SMS များကို တယ်လီနော ဆင်းကဒ်များမှ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။ နိုင်​ငံခြားမှ ဖုန်​း​ခေါ်ဆိုမှု​တွေ ဝင်​လာရင်​ ကိုယ်​့ဘက်​က ​ပိုက်​ဆံ​ကျခံစရာလိုပါသလား။
မလိုပါဘူး။ အကယ်​၍ သင်​ဟာ မြန်​မာနိုင်​ငံထဲမှာ ရှိပြီး နိင်​ငံခြားမှ ဖုန်​း​ခေါ်လာပါက ​ပေး​ဆောင်​ရန်​မလိုအပ်​ပါ။ အကယ်​၍ သင်​ဟာ နိုင်​ငံရပ်​ခြားတွင်​ ​နေထိုင်​ပြီး သင်​့ဖုန်​းထံသို့ ဖုန်​းဝင်​လာပါက ​ငွေ​ပေး​ချေရပါမည်​။ နိုင်​ငံတကာသို့ ​ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်​ ​ငွေ​ပေး​ချေနှုန်​းကို ဤ​နေရာတွင်​ ကြည်​့ရှုပါ။
၂။ အခြားနိုင်​ငံမှ landline ဖုန်​းနံပါတ်​​တွေကို ဘယ်​လို​ခေါ်ဆိုရမလဲ။
 ကိုနှိပ်​ပါ။ သို့မဟုတ်​ [+] [country code] [local area code without zero] [local number] ကိုနှိပ်​၍ ​ခေါ်ဆိုနိုင်​ပါသည်​။
၃။အခြားနိုင်​ငံမှ မိုဘိုင်​းဖုန်​းနံပါတ်​​တွေကို ဘယ်​လို​ခေါ်ဆိုရမလဲ။
 ကိုနှိပ်​ပါ။ သို့မဟုတ်​ [+] [country code][mobile number without zero] ကိုနှိပ်​၍​ခေါ်ဆိုနိုင်​ပါသည်​။
၄။ ဖုန်​း​ခေါ်ဆိုခြင်​းကို ဘယ်​သူမှ ပြန်​လည်​​ဖြေကြားခြင်​းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါ​ပေမယ်​့ voicemail ​တော့ရခဲ့ပါတယ်​။ အဲ့ဒီအတွက်​ ကုန်​ကျ​ငွေ ရှိနိုင်​ပါသလား။
voicemail သို့မဟုတ်​ answering machine မှ service ရခဲ့ပါက ကျသင်​့​ငွေ​ပေး​ချေရပါမည်​။
၅။ နိုင်​ငံခြားမှ ​နေ၍ တယ်​လိီ​နော မြန်​မာမိုဘိုင်​းဖုန်​းကို ဘယ်​လို​ခေါ်ဆိုနိုင်​သလဲ။
00 ကို နှိပ်​ပါ။ သို့မဟုတ်​ [+]  [979 XXXXXXX] ကိုနှိပ်​၍ ​ခေါ်ဆိုနိင်​ပါသည်​။
၆။ နိုင်​ငံတကာမှ စာတို​ပေးပို့လာခြင်​းအတွက်​ ကုန်​ကျ​ငွေ ​ပေး​ချေရပါလား။
၇။ အခြားနိုင်​ငံမှ မိုဘိုင်​းဖုန်​းနံပါတ်​​တွေကို ဘယ်​လို စာတို ​ပေးပို့နိင်​သလဲ။
 သို့မဟုတ်​ [+] [country code] ကို မိုဘိုင်​းဖုန်​းနံပါတ်​၏​ရှေ့တွင်​ ရိုက်​နှိပ်​၍ ​ပေးပို့နိုင်​ပါသည်​။
၈။ SMS တစ်​​စောင်​တွင်​ စာလုံး​ရေ ဘယ်​​လောက်​ ပို့နိုင်​ပါသလဲ။
ပုံမှန်​အ​နေဖြင်​့ စာတိုတစ်​​စောင်​လျှင်​ စာလုံး​ရေ ၁၆၀ အထိ ရိုက်​နှိပ်​နိုင်​ပါသည်​။ handset အမျိုးအစား​ပေါ်မူတည်​၍ အနည်​းငယ်​ ကွဲလွဲနိုင်​ပါသည်​။
၉။နိုင်​ငံရပ်​ခြား​ရောက်​နေချိန်​တွင်​ တယ်​လီ​နော မိုဘိုင်​းအင်​တာနက်​ ကို အသုံးပြုနိုင်​ပါသလား။
သင်​့ တယ်​လီ​နော ဆင်​းကဒ်​ဖြင်​့ international roaming ပြုလုပ်​၍ အင်​တာနက်​အသုံးပြု နိုင်​ပါသည်​။ အတိအကျသိနိုင်​ရန်​ ဤ​နေရာကို နှိပ်​ပါ။
၁၀။ Roaming လုပ်​ထားချိန်​မှာ ဝင်​လာတဲ့ ဖုန်​း​ခေါ်ဆိုမှု​တွေအတွက်​ ​ငွေ​ပေး​ချေရမှာလား။
အဝင်​​ခေါ်ဆိုမှု အထွက်​​ခေါ်ဆိုမှုနှစ်​ခုစလုံးအတွက်​ ​ကျသင်​့​ငွေ​ပေး​ချေရပါမည်​။ ​စျေးနှုန်​းအတိအကျသိနိုင်​ရန်​ ဤ​နေရာကို နှိပ်​ပါ။
၁၁။ နိုင်​ငံခြားမှာ ဖုန်​း​ပျောက်​သွားခဲ့ရင်​/ ဖုန်​းအခိုးခံရရင်​ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲ။
+959790097900 ကို ​ခေါ်ဆို၍ အကူအညီရယူနိုင်​ပါသည်​။ သင်​၏ လက်​ကျန်​​ငွေနှင်​့ သင်​၏ ကို်​ယ်​ပိုင်​အချက်​အလက်​များအား အလွဲသုံးစားမလုပ်​နိုင်​ရန်​ ဖြစ်​ပါသည်​။ သင်​၏ ဆင်​းကဒ်​​ပျောက်​ဆုံး/အခိုးခံရ​ကြောင်​း တယ်​လီ​နောသို့ မတင်​ပြမချင်​း ကုန်​ကျ​ငွေနှင်​့ပတ်​သက်​၍ အားလုံးကို ကဒ်​ကိုင်​​ဆောင်​သူမှ တာဝန်​ယူရပါမည်​။
၁၂။ နိုင်​ငံခြားက​နေ မြန်​မာနိုင်​ငံကို လာလည်​ဖို့ အစီအစဉ်​ရှိပါတယ်​။ မိမိရဲ့ ဖုန်​းကို တယ်​လီ​နော ကွန်​ရက်​နဲ့ အသုံးပြုနိုင်​ပါသလား။
အသုံးပြုနိုင်​ပါသည်​။ တယ်​လီ​နောမြန်​မာနှင်​့ roaming agreement ရယူထားပါက အသုံးပြုနိုင်​ပါသည်​။ ခရီးမထွက်​ခင်​ သင်​၏ operator နှင်​့ ​ဆွေး​နွေးတိုင်​ပင်​နိုင်​ပါသည်​။
၁၃။ မြန်​မာနိုင်​ငံတစ်​ဝှမ်​းသို့ လာ​ရောက်​လည်​ပတ်​​နေပါတယ်​။ တယ်​လီ​နောရဲ့ ရရှိနိုင်​တဲ့ ကွန်​ရက်​ဆွဲအားကို သိချင်​ပါတယ်​။
ချင်​းပြည်​နယ်​နှင်​့ ရခိုင်​ပြည်​နယ်​အတွင်​းရှိ ​ဒေသ​အချို့မှ လွဲ၍ မြန်​မာနိုင်​ငံရှိ ​နေရာအများစု၌ တာဝါ​ပေါင်​း 3380 ဖြင်​့ 100% 3G network ရရှိ​စေရန်​ ပြုလုပ်​ထားပြီးဖြစ်​ပါသည်​။
၁၄။ လက်​ကျန်​​ငွေကို ဘယ်​​လောက်​ ကြာကြာ သုံးစွဲနိုင်​ပါသလဲ။
​နောက်​ဆုံး ​ငွေဖြည်​့သွင်​းပြီးချိန်​မှ စ၍ ၃၆၅ရက်​တိတိ အကျုံးဝင်​ပါသည်​။
၁။ Telenor Myanmar ကို ဘယ်လိုမျိုး အလုပ်လျှောက်လွှာတင်နိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရာထူး နဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာ ဖောင် များကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Careers Page မှာ ကြေငြာထားပါတယ် လျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာနှင့် အကြောင်းကြားစာများကို hr.myanmar@telenor.com ကို ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
၂။ ကျွန်ုပ် အလုပ်လျှောက်ထားပါသော်ငြားလဲ အခုထိ အကြောင်းမကြားကြသေးလို့ပါ။
လျှောက်လွှာများကို လက်ခံရရှိမှသာ လျှောက်လွှာရှင်များအားလုံး အကြောင်းကြားခြင်းရရှိမှာပါ ။
အလုပ်ပေါ်တွင် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်မားသူများသာ ဆန်ခါတင်စာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ကာ နောက်ထပ် တဆင့်အတွက် ထပ်မံဆက်သွယ်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည် ဟု အကြောင်းကြားစာမှာလဲ ရှင်းပြပေးထားပါတယ် ။
သင်ဟာ ဆန်ခါတင် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်လာမည်ဆိုလျှင် interview test ကို ဖြေဆိုရန် ဖိတ်ကြားမှု ရရှိမှာပါ ။
သင်ဟာ အလုပ်လျှောက်ရာတွင် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲ သင့်ရဲ့ အလုပ်လျှောက်လွှာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာ အချက်အလက်တွေ ထဲမှာ ထည့်သွင်းကာ သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်ပါသည် ။ အကယ်၍ သင့်၏ အရည်အချင်း များနှင့် သင့်တော်မည့် ရာထူးရှိခဲ့လျှင် ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကျွန်ုပ်သည် Telenor's Myanmar Network ကုမ္ပဏီ အဆောက်အအုံတာဝါ တွင် အလုပ်လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားပါသည် ။ မည်ကဲ့သို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသနည်း ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီ Apollo နဲ့ IGT ဟာ ဆိုရင်ဖြင့် ကန်တရိုက်တာ အခွဲဖြစ်ပါတယ်။
ထို ကုမ္ပဏီ များကိုလဲ လွတ်လပ်နေသော ရာထူးနေရာများအတွက် ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၁။ တယ်လီနော မြန်မာအတွက် ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။ ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ။
သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လက်လီရောင်းချလိုသူများသည် လျှောက်ထားရန် ပုံစံများအား ဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူ၍ ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော လျှောက်လွှာဖောင်များအား partner.myanmar@telenor.com.mm သို့ ပြန်လည်ပေးပို့ရပါမည်။ ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များသည် ကျွုနု်ပ်တို့အား သင့်ကိုရွေးချယ်ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ လတ်တလောလိုအပ်ချက်များနှင့် သင်၏ စိတ်ဝင်စားမှုတို့ ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ဖြစ်ပါသည်။.
၂။ ပြန်လည်ရောင်းချဖို့ တယ်လီနောဆင်းကဒ်တွေ ဘယ်အချိန်မှာ ရနိုင်မလဲ။
ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် သဘောတူညီမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးပါက sim card များ ရရှိနိုင်မည့်နေ့ကို အတည်ပြုပေးပါမည်။
၁။ Star Postpaid Plan များကိုရယူ သုံးစွဲရန် မည်ကဲ့သို့ သတ်မှတ်ချက်ရှိသလဲ။
တယ်လီနောစတားသုံးစွဲသူများသာ STAR Postpaid Play များကိုရယူသုံးစွဲခွင့် ရှိပါသည်။
၂။ ဘယ်အချိန်မှာ Bill ကို ဘယ်လိုစစ်လို့ရမလဲ?
လစဉ် ၃ ရက်နေ့ တွင်ရယူနိုင်မည်။
Telenor Myanmar Self Care App မှတဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Telenor Myanmar မှ ပေးပို့သော SMS မှတဆင့် သိရှိနိုင်ခြင်း။
Telenor Myanmar မှမိမိ၏ Email သို့ ပေးပို့သော E-bill မှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
၃။ လစဉ်အကျိုးခံစားခွင့်၊ လစဉ်အပိုသုံးငွေ နှင့် Internet Package များကို ဘယ်လိုစစ်မလဲ?
Telenor Myanmar Self Care App
*124# လစဉ်အပိုသုံးငွေ (သို ) လစဉ် Plan ဖိုးအပြင် ထပ်ဆောင်းအသုံးပြုလို့ရသောငွေ။
124*1# လစဉ် Plan Benefit များ ၊ ထပ်ဆောင်းဝယ်ယူထားသော Package များ။
၄။ လစဉ်ရရှိမည့် အသံ၊ အင်တာနက် နှင့် စာတိုများသုံးစွဲ၍ကုန်သွားပါက မည်သို့ဆက်၍ အသုံးပြုရမလဲ?
လစဉ်သုံးစွဲခွင့်ရမည့် အပိုသုံးစွဲခွင့်ငွေမှ အောက်ပါ သုံးသလောက်ပေး နှုန်းထားများဖြင့် ဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်သလို My Telenor Self Care App ( သို့ ) *999# USSD Menu မှတဆင့် Star Postpaid User များအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားသော Package များကို ထပ်ဆောင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
တယ်လီနောအချင်းချင်း - ၁ မိနစ် ၁၀ ကျပ် / စာတို ၁ စောင် ၁၀ ကျပ်
တယ်လီနောမှ တခြားပြည်တွင်း ဖုန်းများသို့- ၁ မိနစ် ၂၀ ကျပ် / စာတို ၁ စောင် ၁၀ ကျပ်
အင်တာနက် - ၁ မီဂါဘိုက် ၅ ကျပ်
၅။ လစဉ် မိမိအသုံးပြုထားသော Bill အား မည်သည့်နည်းဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်မလဲ?
Telenor Show Room များတွင်ဖြစ်စေ
KBZ Mobile Banking / KBZ iBanking မှတဆင့် ဖြစ်စေ၊
MyTelenor App (MPU Card Payment) တွင်စတင်ပေးဆောင်နိုင်မည်
၆။ Bill မဆောင်ရသေးမှီ အချိန်တွင် ငွေဖြည့်ပါက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?
၇။ ၂၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းမှ Bill လာဆောင်ပါက မည့်သည့်အချိန်တွင် Unbar ပြန်ဖြစ်မလဲ?
Bill ဆောင်ပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
၈။ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်က ဘယ်ချိန်ထိလဲ။
ယခုပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်မှာ September 8, 2019 မှ အစီအစဉ်ပြီးဆုံးကြောင်းမကြေငြာခင်ထိဖြစ်ပါတယ်။